तपाईको इन्टरनेट राम्रो चलेन ? यि कारण हुन सक्छन् « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
काठमाडौँ । तपाईको घरमा रहेको इन्टरनेट राम्रो चलेन ? कहिल्यै तपाईकै कारण पनि इन्टरनेट नचलेको पो होकी ? तपाईले घरमा वा अफिसमा राखेको इन्टरनेट फिलिली चलाउन मन छ ? त्यो हो भने राउटरलाई होचो स्थान वा कुनामा नराखी अग्लो स्थानमा राख्नुहोस् । राउटल भुइमा छ भने त्यसले राम्रो सिग्नल नदिने हुँदा वाईफाईको स्पीड घट्छ ।
तपाईले वाईफाईको स्पीड बडाउन चाहानुहुन्छ भने समय समयमा वाईफाईको पासवर्ड परिवर्तन गर्ने बानी पनि बसाल्नुपर्छ । एउटै पासवर्ड प्रयोग गर्दा उक्त पासवर्ड धेरै ब्यक्तिको डिभाइसमा सेट हुँदा राम्रो तरिकाले सिग्नल दिन नसक्दा राम्रोसँग इन्टरनेट नचल्ने समस्या हुन्छ ।
त्यसैले बेला बेलामा राउटरको पासवर्ड परिवर्तन गर्ने गर्नुपर्छ । त्यस्तै राउटरलाई हामीले नियमित अन अफ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हामीमध्ये कतिले राउटर अफ नै गर्दैनौँ । जसका कारण इन्टरनेट नचलेको हुनसक्छ । राउटरलाई अफ अन नर्गदा इन्टरन फाइलहरु राम्रोसँग काम नर्गदा इन्टरनेट स्लो हुने हुँदा दैनिकजसो नै राउटरलाई अन अफ गरेमा इन्टरनेट पहिलेभन्दा राम्रोसँग चल्छ ।
जोरपाटी । काठमाडौ जोरपाटीमा गए राती एउटा द’र्दनाक घ’टना घटेको छ जहा एक जना युवा
तितो सत्यको ‘फुच्चे राज’ अहिले जवान र ह्याण्डसम भए
कुनै समय चर्चित हास्य ऋंखला तितो सत्यबाट चर्चामा आएका बालकलाकार राज आचार्य पछिल्ले समय मिडियामा